Wararka Maanta: Sabti, July 31, 2021-Wasiir Caadle " Beelaha Xawaadle iyo Abgaal weey ku dulman yihiin maamulka Hirshabeelle"
Wasiir Caadle ayaa sheegay in maamulka Hirshabeelle dhismahiisii koowaad lagu dhisay or orod ayna ku dulman yihiin Beelaha Xawaadle iyo Abgaal.
Waxuu sheegay in Hirshabeelle caqabadaha ugu waa weyn ay la socon la' dahay ay ka mid tahay beesha Xawaadle oo diidaneyd hanaankii loo maray dhismaha Hirshabeelle markii hore iyo markan dambaba.
"Hirshabeelle Beelaha Xawaadle iyo Abgaal way ku dulman yihiin oo iyaga ayaaba maynorati ka ah maamulka sababto ah 99 Xildhibaan oo Hirshabeelle ay ka kooban tahay labada beel Xildhibaanada ay ku leeyihiin marka la isku geeyo waa 29 Xildhibaan inta kalana waa beelaha kale marka 29 laga jaro tiradaas waxay mujineysa ineysan waxba ka aheyn Hirshabeelle Abgaal iyo Xawaadle" ayuu yiri Wasiir Caadle.
Wasiir Caadle ayaa intaasi ku daray in Xildhibaanada Hirshabeelle sharci ahaan markii hore ay ka koobnayeen 71 Xildhibaan balse qancin dheeraad ah oo loo sameynayay cidii tabasho muujisaba in Xildhibaanada loo kordhiyo ayay gaartay 99 Xildhibaan oo aysan xamili karin Hirshabeelle.
"Hirshabeelle waxa jira beelo 6 kursi kulahaa bilowgii oo maanta leh 12 kursi iyo kuwa laha 3 kursi oo maanta leh 6 kursi, iyadoo Xawaadle iyo Abgaalna wali kurastodii aysan waxba ku kordhin waana taasina waxay ka mid tahay caqabadaha jiro oo hortaagan Hirshabeelle" ayuu yiri Wasiir Caadle.
Hadalkan kasoo yeeray wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle ayaa imaanaya xili Hirshabeelle jiritaan keeda ay si weyn uga soo horjeedaan beesha Xawaadle oo muddo sideed bilood ah ka hortaagan inuu Baledweyne tago madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen.